Dalxiiska Seychelles ayaa Bilawday Wadatashiyada Suuqgeynta Sanadka Dhexe ee Sanadlaha ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles ayaa Bilawday Wadatashiyada Suuqgeynta Sanadka Dhexe ee Sanadlaha ah
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wadatashiga Suuq -geynta Dalxiiska Seychelles
Dalxiiska Seychelles ayaa la-tashiyo sannadeedkii bartamihii sannadka 2021-ka iyo la-talinta suuqgeynta la-hawlgalayaasha dalxiiska maxalliga Talaadadii, Luulyo 27-keedii, si ay dib-ugu-eegaan waxqabadka meesha loo socdo illaa maanta oo ay ka wada hadlaan oo ay hagaajiyaan qorshayaasha qaybta labaad ee sannadka.
Wadatashiga ayaa ku bilowday hadal kooban oo uu jeediyay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Ambassador Sylvestre Radegonde.
Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska, Marwo Sherin Francis, ayaa soo bandhigtay istaraatiijiyadda waaxda.
Waaxda Dalxiiska waxay si dhow ula shaqeyneysaa daneeyayaasha dalxiiska iyo ururada dowladda si ay dib ugu eegaan badeecadaha lagu bixiyo Seychelles ayna siiyaan adeegyo wanaagsan kuwa soo booqda.
Seychelles ayaa dhowaan diiwaangelisay imaanshiyaheedii toddobaadlaha ahaa ee ugu sarreeyay tan iyo markii uu cudurku dillaacay bishii Maarso 2021, iyada oo 5,367 booqdeyaal ah Toddobaadka 29 ee 2021, ama kaliya 22% ay ka hooseeyaan isla toddobaadkan 2019, daneeyayaasha warshadaha ayaa bartay.
Waxaa lagu qabtay madal -madal ZOOM, wada -tashigan oo socon doona labada toddobaad ee soo socda, waxaa ku bilaabay hadal kooban Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Danjire Sylvestre Radegonde, daneeyayaasha warshadaha. gudaha Seychelles iyo shaqaalaha Waaxda Dalxiiska ee daafaha dunida. Waxaa xigay soo -jeedintii istiraatiijiyadda waaxda oo uu soo jeediyay Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska (PS), Marwo Sherin Francis.
Isaga oo la hadlaya bah -wadaagta warshadaha, ayuu Wasiir Radegonde iftiimiyay in marka laga reebo masiibada socota, oo hoos u dhigaysa socdaalka adduunka, warshadaha dalxiiska ee maxalliga ah ay wajahayaan caqabado badan, oo hortaagan kobaca warshadaha. Wasiirku wuxuu xaqiijiyey in Waaxda Dalxiisku ay si dhow ula shaqeyneyso daneeyayaasha dalxiiska iyo ururada kala duwan ee dowladda si ay dib ugu eegaan badeecadaha lagu bixiyo Seychelles ayna u fidiyaan adeegyadeeda kuwa soo booqda.
Wasiir Radegonde ayaa faallo ka bixiyay in uu si weyn u dhiirri -gelinayo kororka joogtada ah ee tirooyinka imaatinka booqdaha, iyo qaybinta dheelitirka ah ee soo -booqdayaasha ee ku kala baahsan xarumaha iyo jasiiradaha kala duwan.
Soo -jeedinteeda, PS Francis waxay bixisay dulmar guud oo caalami ah oo ku saabsan xaaladda ay hadda ku sugan tahay warshadaha dalxiiska maxalliga ah, iyagoo ka faalloonaya saamaynta hubin la’aanta caalamiga ah ay ku leedahay dhaqaalaha Seychelles iyo sidoo kale bixinta dulmarka saadaasha ka dhanka ah tirooyinka imminka imanaya iyo ballan -qaadyada hore ee la qabtay , taas oo muujinaysa koboc la filayo labada meelood ee soo socda.